यसकारण लाग्छ झाडापखाला, यो रोगबाट बच्न के गर्ने ? – Jaljala Online
Posted on May 18, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
जेठ ४, काठमाडौं । मौसम परिवर्तनसँगै अहिले मौसमी रुघाखोकी र झाडापखालाको बिरामी पनि बढ्दै गइरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष झाडापखालाले नेपालको कुनै न कुनै ठाउँमा माहामारीको रुप लिने गरेको छ । झाडापखाला, हैजा जस्ता सरुवा रोगबाट वर्षेनी धेरै नागरिकको ज्यानै जाने गरेको छ । यस्तै झाडापखालाको मुख्य जोखिममा बालबालिका र पर्ने गरेका छन् । झाडापखालाको कारण, उपचार र बच्ने उपायका विषयमा केन्द्रीत रहेर शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले विस्तृतमा जानकारी गराएका छन्ः
एकदेखि दुई पटक दिसा हुँदा समान्य अवस्था मानिन्छ । दिसामा चिप्लो पदार्थ सिगान जस्तै मिसिएको छ अथाव पानी÷पानी मात्रै छ भने झाडापखाला लागेको भनेर बुझन् सकिन्छ । दिसाबाट पानी मात्रै गएको छ भने भाइरलको कारणले झाडापखाला लागेको बुझ्न सकिन्छ । यस्तै रगतमासी मिसिएको दिसा भयो भने अमिबा भएको बुझ्नु पर्दछ ।
दिशाबाट रगत÷रगत मात्रै भयो भने ब्याक्टेरियाको कारण भएको बुझ्नु पर्दछ । दिशा गर्दा सेतो पानी धेरै आएको खण्डमा भने हैजा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । हैजाले धेरै पटक पखाला लाग्ने र शरीरमा तुरुन्तै शुख्खापन हुने समस्या हुन्छ । साथै जिब्रो सुक्ने र जिब्रो चाउरी पर्ने समस्या हैजाबाट हुन्छ ।
जेठ ३, काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालमा हुने कारोबारको कर उठाउने भएको छ। यसका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्थासहितको विधेयक बनाएर संसदमा पेस गरिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने कारोबारलाई नियमन गर्न सरकारले ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अगाडि बढाएको हो। यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालबाट ठूलो रकम राजस्व संकलन गर्न सकिने […]
जेठ ५, काभ्रे । पाँचखाल नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका गर्भवती महिलाको घरमै गर्भजाँच सेवा दिन थालेको छ । नपाले गत शुक्रबारदेखि चिकित्सकसहितको टोली गर्भवतीको घरमै पुगेर गर्भजाँचअन्तर्गत भिडियो एक्स–रे सेवासमेत उपलब्ध गराएको हो । गर्भवती महिलाको घरमै भिडियो सेवासहितको गर्भजाँच कार्यक्रमको नपास्थित वडा नं १ अनैकोट र १३ नं वडाको कोशीदेखाबाट शुरु गरिएको नपा उपप्रमुख लक्ष्मी […]
तपाईले कतै ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नुभएको त छैन ?
सिके राउतको पार्टीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय घेर्यो, कारण यस्तो छ ?